China Stainless simbi Angle Bar Kugadzira uye Fekitori | Huaxiao
Isimbi isina simbi kona simbi inogona kuve inoumbwa nenhengo dzakasiyana-siyana dzinogamuchira simba zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvechimiro, uye inogona kushandiswa senhengo inobatanidza pakati pezvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana dzekuvaka uye zvivakwa zveinjiniya, senge matanda, mabhiriji, shongwe dzekutapurirana, kusimudza uye kutakura michina, ngarava, mafekitori emabhizimusi, shongwe dzekupindura, makomba emidziyo uye masherufu edura.
Sino Stainless Simbi kugona pamusoro kwesimbi isina ngirozi Angel bar
Saizi : 2 # -20 #, 20 x 20 - 100 x 100
Giredhi: 201, 304, 316,316L, 310s, 430,409
Pedzisa: Dema, NO.1, chigayo kupera, kutonhora dhonza
Tsananguro yakazara nezve ngirozi bar
Isimbi isina simbi angle simbi tambo refu yesimbi inoenderana kune mumwe kune ese mativi. Kune akaenzana simbi dzesimbi dzisingasviki uye dzisina kuenzana simbi dzesimbi angles. Mativi eiyo yakaenzana simbi isina kukona kona yakaenzana paupamhi. Iwo maratidziro anoratidzirwa mumamirimita ehupamhi hwedivi× divi upamhi × kukora kwedivi. Semuyenzaniso, "∠25×25×3 ″ zvinoreva chakaenzana simbi isina kukosheswa ine upamhi hwepadivi pe25 mm uye nehupamhi hwemativi e3 mm. Iyo inogona zvakare kuratidzwa nenhamba yemodheru, iyo modhi nhamba ndiyo nhamba yemasentimita eupamhi hwedivi, senge∠2.5 #. Iyo modhi hairatidzi saizi yemakosi akasiyana emakona mune imwechete modhi. Naizvozvo, upamhi hwepadivi uye ukobvu hwesimbi isina kukiya simbi kona inozadzaed muchibvumirano nemamwe magwaro, uye modhi yacho haifanire kushandiswa yega. Rondedzero yeinopisa-yakakungurutswa yakaenzana simbi isina simbi engoro simbi ndeye 2 # -20 #.
Stainless simbi Ngirozi Tsanangudzo yakajairwa
GB / T2101-89 (General zvirevo zvekugashira, kurongedza, kumaka uye zvemhando zvitifiketi zvezvikamu zvesimbi); GB9787-88 / GB9788-88 (saizi, chimiro, huremu uye kutsauka kunotenderwa kweanopisa akapetwa akaenzana / asina kuenzana-mativi esimbi dzesimbi isina tsvina); JISG3192 -94 (chimiro, saizi, uremu uye shiviriro yesimbi inopisa-yakakungurutswa); DIN17100-80 (general zvivakwa simbi yemhando yepamusoro); ГОСТ535-88 (yakajairwa kabhoni simbi mamiriro ehunyanzvi mamiriro).
Zvinoenderana neiri pamusoro chiyero, simbi isina kukiya kona simbi inofanirwa kuunzwa muhombodo, huwandu hwesumbu, kureba kwesumbu, nezvimwe zvinofanirwa kutevedzera zvirevo. Isimbi isina simbi kona simbi inowanzoendeswa mune isina fomu, uye inofanirwa kuchengetedzwa kubva kuhunyoro panguva yekufambisa uye yekuchengetedza.
Mechanical performance kuongorora uye chiyero
(1) Yekuongorora nzira:
1 tensile bvunzo nzira. Inowanzo shandiswa yakajairwa yekuongorora nzira ndeye GB / T228-87, JISZ2201, JISZ2241, ASTMA370, ГОСТ1497, BS18, DIN50145, nezvimwe; 2 kukotamisa bvunzo nzira. Kazhinji inowanzo shandiswa yekuongorora nzira ndeye GB / T232-88, JISZ2204, JISZ2248, ASTME290, ГОСТ14019, DIN50111, nezvimwe zvakadaro.
(2) Performance index: Izvo zvekuongorora zvinhu zvekuongorora mashandiro esimbi yesimbi kona simbi zvinonyanya kuita bvunzo uye kukotamisa bvunzo. Zviratidziro zvinosanganisira poo poindi, kusimba tensile, kukwirisa, uye kukomba kukodzera.
Pashure: chinopinda Stainless simbi machira
Zvadaro: Isimbi isina tsvina Channel Bar
Stainless Simbi Triangle Bar